China Private Label Sandam-paosy famonosana volom-borona ambongadiny 25mm 100% Mink Eyelashes orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Weiti
Fametahana marika manokana momba ny volomaso eyelash boaty hosoka ambongadiny 25mm volomaso Mink 100%
Fehiloha volom-borona minky 1, 25mm lava
2, curl tonga lafatra mifanaraka amin'ny kapoka ataonao
3, Mora sy mahazo aina ampiharina
4, logo manokana an'ny Custom
Ny famirapiratan'ny Kalocils dia mikapoka:
Ny lokony dia mamirapiratra, malama, tsy maloka, izay mampiavaka ny volomaso diso kalitao avo lenta.
Malemy sy henjana:
Ny fitaovana mafy dia hametraka tsindry be amin'ny hodi-maso, ary rehefa avy nitafy azy dia toa sandoka sy tsy voajanahary izany. Raha malefaka loatra ny volomaso sandoka dia tsy mahitsy izy ireo ary ho ambany ny curl. Ny tena mety dia malefaka izy ary somary mafy noho ny volomaso anao.
Curl tonga lafatra:
Volomaso sandoka tsara dia hiseho voajanahary, mitovy amin'ny fitomboan'ny volomaso ambony. Volomaso sandoka mahitsy dia hahatsapa ho henjana rehefa tonta, ary tsy hisy hatsarana.
Fampiharana sy fampiasana:
Ny eyelashes diso dia tena ilaina amin'ny fahazoana hatsarana. Na makiazy isan'andro na mandray anjara amin'ny lanonana fandihizana isan-karazany, ny volomaso tsara dia hisarika ny sain'ny olona ary hatoky tena kokoa.
Ny karazan-karazam-bolo isan-karazany dia azo omena betsaka avy amin'ny tahiry ary koa manohana ny fanaingoana, mba hahafahanao manana eyelashes diso tianao amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny maha mpanamboatra hodi-maso diso dia tanjontsika hatrizay ny hampivoatra hatrany ny fomba volomaso mafana sy malaza.
Karazan-boaty fonosana volomaso sandoka isan-karazany no azo amboarina, ary azo amboarina ny logo manokana anao. Ny hany ilainao dia ny mandefa aminay na milaza aminay ny hevitr'ilay sary famantarana tadiavinao. Ny ekipa mpamorona mahay anay dia hanome anao ny soso-kevitra tsara indrindra. Manolotra serivisy famolavolana logo sy fonosana fonosana maimaimpoana izahay. Raha mila sary vokatra ianao dia azonay atao ny maka sary.
Ahoana no hikarakarana?
Tehirizo ao anaty boaty fitehirizana izay nahatratrarany azy ireo ny kapoka nataonao mba hitazomana azy ireo ho madio, maina ary harovana tsy haratra.
Raha misy fanamafisana eo aminy ny kapokao, AZA ATAO IZAO, dia hanimba azy ireo izany. Mba hanadiovana ny fananganana rehetra, borosio moramora amin'ny mascara madio ny kapoka. Azonao atao ihany koa ny manala ireo lakaoly sisa tavela amin'ny fehin-kibo amin'ny tweezers. Azafady mba aza mando ny kapokao.
Rehefa voakarakara tsara ny kapoka dia azo ampiasaina manodidina ny 20-30 fotoana
SOSO-KEVITRA: Mba hampitomboana ny halavan'ny fiainana sy hihazonana ny fomba amam-boany ny fikapohanao, aza asiana mascara mivantana amin'izy ireo. Aleo asio mascara amin'ny kapoka voajanaharyo aloha, avelao ho maina izy avy eo apetaho ny kapoka.
Teo aloha: Ataovy miavaka ny fanitarana volom-boasary kilasika manokana
Manaraka: Volomaso misy marika manokana namboarina manokana Wholesale Wholesale Fluffy 25mm Mink eyelashes
Volomaso diso 3d
Volomaso diso sandoka
Ambongadiny 100% Real Mink 25mm 5D Eyelash Indivi ...
Volomaso maso, Fanitarana volomaso, lipgloss, kapoka mink, Mpivarotra volomaso, eyeliner,